Odema in pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Odema in pregnancy
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ခွလေကျတှေ ဖောယောငျတတျခွငျးဟာ ပုံမှနျလား ?
အမြိုးသမီးတဈယောကျ ကိုယျဝနျစဆောငျလိုကျရပွီဆိုပါက သူမရဲ့ခန်ဓာကိုယျ ဖွဈစဉျဟာ သာမနျအမြိုးသမီးနဲ့ မတူပဲ ကှဲပွားပွောငျးလဲလာတတျပါတယျ…ဒီလိုပွောငျးလဲ ဖွဈစဉျတှထေဲမှာမှ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ခွလေကျတှေ ဖောတတျ ယောငျတတျတာ ပုံမှနျလား ၊ စိုးရိမျစရာ တဈခုလားဆိုတာ ပွောပွခငျြပါတယျ…
ဖောတယျ၊ ယောငျတယျ ဆိုတာ… ခန်ဓာကိုယျတဈသြူးထဲမှာ အရညျပိုတှေ စုစညျးလာတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ…ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာ မိမိခန်ဓာကိုယျရဲ့ သှေးတှငျးဇီဝဖွဈစဉျပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ရဓောတျကို ပိုမိုထိနျးသိမျးထားတဲ့အတှကျ လကျ၊ ခွကေငျြးဝတျအစရှိတဲ့နရောတှမှော အနညျးငယျဖောယောငျတာကို သတိထားမိနိုငျပါတယျ…
ဒါပွငျ တနတေ့ခွား ကွီးထှားလာတဲ့ သားအိမျဟာ သှေးပွနျကွောတှကေို ဖိလာပါတယျ.. ဒီအခါမှာ နှလုံးကို သှေးပွနျလြှောကျမှု နှေးသှားပွီး ခွထေောကျမှာရှိတဲ့ တဈသြှူးတှမှော ပိုစုဆောငျးမိရာက ဖောယောငျတတျပါသေးတယျ..
ကိုယျဝနျရငျ့လာတာနဲ့ အမြှ ဖောယောငျတာ အနညျးငယျ သိသာလာနိုငျပါတယျ…ဒါပွငျ ရမှောရညျမြားတဲ့သူ… အမှာပူးကိုယျဝနျ စရှိတာတှမှောလဲ ပိုယောငျယမျးတတျပါတယျ…မီးဖှားခါနီးလေ အနညျးငယျ ပိုဆိုးလေ ဖွဈတတျပါတယျ…သို့သျော မီးဖှားပွီး ပထမနမှေ့ာပဲ ဆီးခနခန သှားခငျြတာ.. ခြှေးထှကျတာတှေ ဖွဈပါလိမျ့မယျ… ဒီလိုအားဖွငျ့ ဖောယောငျခွငျးဟာ သိသိသာသာ လြော့ကသြှားပါလိမျ့မယျ….
ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာ ခွလေကျတှမှော အနညျးငယျ ယောငျယမျးတတျတာ ပုံမှနျလို့ ဆိုရမှာပါ… သို့သျော
– မိမိ မကျြနှာပါ အမျးလာခွငျး
– မကျြလုံးတဝိုကျ သိသိသာသာ မို့လာခွငျး
– လကျခွတှေမှော အရမျးဖောယောငျလာခွငျးတှေ ရှိလာရငျတော့ “သတိပွုစရာ” ပါ.. ဒါဟာ ကိုယျဝနျဆောငျ့တခြို့မှာ ဖွဈတတျတဲ့ ” ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ သှေးတိုးခွငျး(pre-eclampsia)” ဖွဈနိုငျလို့ပါ..ဒါပွငျ ခွထေောကျတဈဖကျဟာ တခွားဖကျထကျ ပိုယောငျနခွေငျး၊ ပေါငျ/ ခွသေလုံးကွှကျသားတှေ နာခွငျးအောငျ့ခွငျး ဒီလိုအခကျြတှရှေိလာရငျတော့ ဆေးခနျးသှားဖို့ သငျ့ပါတယျ…
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ဖောယောငျတာကို သကျသာဖို့ နညျးလမျးလေးတှလေဲ ရှိပါတယျ…
– ထိုငျတဲ့ အခါမှာ မိမိခွထေောကျအောကျကို ခုံပုလေး ခုထားပါ…
– ထိုငျတဲ့အခါမှာ ခွထေောကျခြိတျထိုငျတာ၊တငျပုလ်လငျထိုငျတာတို့ မလုပျပါနဲ့…
– ခွကေို ဆနျ့ထိုငျပါ…
– ခွဆေနျ့လကျဆနျ့ လမျးလြှောကျပါ..ဒီအခါမှာ သှေးလညျပတျမှုကောငျးစပွေီး ဖောယောငျတာကို ဟနျ့တားနိုငျပါတယျ..
– ခွခေငျြးဝတျနာကွှကျသားတှကေို ကွပျတငျးစတေဲ့ ခွအေိတျတှ၊ဘောငျးဘီအကွပျတှေ မဝတျပါနဲ့.
– နစေ့ဉျပုံမှနျ လှုပျရှားမှုလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှေ လုပျပါ..( ဥပမာ – ရကေူးခွငျး၊လမျးလြှောကျခွငျး၊အေးရိုးဘဈ ကစားခွငျး)
– သငျ့တငျ့မြှတသော ကနျြးမာစသေော အစားအသောကျမြား စားပါ..အသငျ့စားအစားအသောကျတှေ ရှောငျပါ…
ကိုယျဝနျဆောငျတဈယောကျဟာ မိမိဆီမှာ ရငျသှေးလေးလှယျထားရပွီးဆိုတာနဲ့ ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှုကို ပုံမှနျပွုလုပျသငျ့ပါတယျ.. ဒါမှသာ နစေ့ဉျပွောငျးလဲနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျဖွဈစဉျနဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျပွီး ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ မိခငျလောငျးဘဝကို အမှနျတကယျ ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈကွောငျး တိုကျတှနျးရငျး….
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​စဉ်​ ​ခြေလက်​​တွေ ​ဖော​ယောင်​တတ်​ခြင်းဟာ ပုံမှန်​လား​ ?
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ ကိုယ်​ဝန်​​စ​ဆောင်လိုက်​ရပြီဆိုပါက သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​ ဖြစ်​စဉ်​ဟာ သာမန်​အမျိုးသမီးနဲ့ မတူပဲ ကွဲပြား​ပြောင်းလဲလာတတ်​ပါတယ်​…ဒီလို​ပြောင်းလဲ ဖြစ်​စဉ်​​တွေထဲမှာမှ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​စဉ်​ ​ခြေလက်​​တွေ ​ဖောတတ်​ ​ယောင်​တတ်​တာ ပုံမှန်​လား ၊ စိုးရိမ်​စရာ တစ်​ခုလားဆိုတာ ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
​ဖောတယ်​၊ ​ယောင်​တယ်​ ဆိုတာ… ခန္ဓာကိုယ်​တစ်​သျူးထဲမှာ အရည်​​ပို​တွေ စုစည်းလာတာကြောင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​…ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​မှာ မိမိခန္ဓာကိုယ်​ရဲ့ ​သွေးတွင်းဇီဝဖြစ်​စဉ်​​ပြောင်းလဲမှု​ကြောင့်​ ​ရေဓာတ်​ကို ပိုမိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့အတွက်​ ​လက်​​၊ ခြေကျင်းဝတ်​​အစရှိတဲ့​နေရာ​တွေမှာ အနည်းငယ်​​ဖော​ယောင်​တာကို သတိထားမိနိုင်​ပါတယ်​…
ဒါပြင်​ တ​နေ့တခြား ကြီးထွားလာတဲ့ သားအိမ်​ဟာ ​သွေးပြန်​​ကြော​တွေကို ဖိလာပါတယ်​.. ဒီအခါမှာ နှလုံးကို ​သွေးပြန်​​လျှောက်​မှု ​နှေးသွားပြီး ​ခြေ​ထောက်​မှာရှိတဲ့ တစ်​သျှူး​တွေမှာ ပိုစု​ဆောင်းမိရာက ​ဖော​ယောင်​တတ်​ပါ​သေးတယ်​..
ကိုယ်​ဝန်​ရင့်​လာတာနဲ့ အမျှ ​ဖော​ယောင်​တာ အနည်းငယ်​ သိသာလာနိုင်​ပါတယ်​…ဒါပြင်​ ​ရေမွှာ​ရည်​များတဲ့သူ… အမွှာပူးကိုယ်​ဝန်​ စရှိတာ​တွေမှာလဲ ပို​ယောင်​ယမ်းတတ်​ပါတယ်​…​မီးဖွားခါနီး​လေ အနည်းငယ်​ ပိုဆိုး​လေ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​…သို့​သော်​ ​မီးဖွားပြီး ပထမ​နေ့မှာပဲ ဆီးခနခန သွားချင်​တာ.. ​ချွေးထွက်​တာ​တွေ ဖြစ်​ပါလိမ့်​မယ်​… ဒီလိုအားဖြင့်​ ​ဖော​ယောင်​ခြင်းဟာ သိသိသာသာ ​လျော့ကျသွားပါလိမ့်​မယ်​….
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​မှာ ​ခြေလက်​​တွေမှာ အနည်းငယ်​ ​ယောင်​ယမ်းတတ်​တာ ပုံမှန်​လို့ ဆိုရမှာပါ… သို့​သော်
– မိမိ မျက်​နှာပါ အမ်းလာခြင်း
– မျက်​လုံးတဝိုက်​ သိသိသာသာ မို့လာခြင်း
– လက်​​​ခြေ​တွေမှာ အရမ်း​ဖော​ယောင်​လာခြင်း​တွေ ရှိလာရင်​​တော့ ​”သတိပြုစရာ” ပါ.. ဒါဟာ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင့်​တချို့မှာ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ ” ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​ ​သွေးတိုးခြင်း(pre-eclampsia)” ဖြစ်​နိုင်​လို့ပါ..ဒါပြင်​ ​ခြေ​ထောက်​တစ်​​ဖက်​ဟာ တခြားဖက်​ထက်​ ပို​ယောင်​​နေခြင်း၊ ပေါင်​/ ​ခြေသလုံးကြွက်​သား​တွေ နာခြင်း​အောင့်​ခြင်း ဒီလိုအချက်​​တွေရှိလာရင်​​တော့ ​ဆေးခန်းသွားဖို့ သင့်​ပါတယ်​…
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​စဉ်​ ​ဖော​ယောင်​တာကို သက်​သာဖို့ နည်းလမ်း​လေး​တွေလဲ ရှိပါတယ်​…
– ​ထိုင်​တဲ့ အခါမှာ မိမိ​ခြေ​ထောက်​​အောက်​ကို ခုံပု​လေး ခုထားပါ…
– ထိုင်​တဲ့အခါမှာ ​ခြေ​ထောက်​ချိတ်​ထိုင်​တာ၊တင်​ပုလ္လင်​ထိုင်​တာတို့ မလုပ်​ပါနဲ့…
– ​ခြေကို ဆန့်​ထိုင်​ပါ…
– ​ခြေဆန့်​လက်​ဆန့်​ လမ်း​လျှောက်​ပါ..ဒီအခါမှာ ​သွေးလည်​ပတ်​မှု​ကောင်း​စေပြီး ​​ဖော​ယောင်​တာကို ဟန့်​တားနိုင်​ပါတယ်​..
– ​ခြေချင်းဝတ်​နာကြွက်​သား​တွေကို ကြပ်​တင်း​စေတဲ့ ​ခြေအိတ်​တွ၊​ဘောင်းဘီအကြပ်​​တွေ မဝတ်​ပါနဲ့.
– ​နေ့စဉ်​ပုံမှန်​ လှုပ်​ရှားမှု​လေ့ကျင့်​ခန်း​လေး​တွေ လုပ်​ပါ..( ဥပမာ – ရေကူးခြင်း၊လမ်း​လျှောက်​ခြင်း၊​အေးရိုးဘစ်​ ကစားခြင်း)
– သင့်​တင့်​မျှတ​သော ကျန်းမာ​စေ​သော အစားအ​သောက်​များ စားပါ..အသင့်​စားအစားအ​သောက်​​​တွေ ​ရှောင်​ပါ…
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​တစ်​​ယောက်​ဟာ မိမိဆီမှာ ရင်​​သွေး​လေးလွယ်​ထားရပြီးဆိုတာနဲ့ ကျန်းမာ​ရေး စစ်​​ဆေးမှုကို ပုံမှန်​ပြုလုပ်​သင့်​ပါတယ်​.. ဒါမှသာ ​နေ့စဉ်​​ပြောင်းလဲ​နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​ဖြစ်​စဉ်​နဲ့ ချိတ်​ဆက်​နိုင်​ပြီး ကျန်းမာ​​ပျော်​ရွှင်​တဲ့ မိခင်​​လောင်းဘဝကို အမှန်​တကယ်​ ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​မှာဖြစ်​​ကြောင်း တိုက်​တွန်းရင်း….
Dangers of Constipation,Urine Retention